16th January 2019 - Samasta Khabar
टुटल चल्न दिने निर्देशन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टुटल साथै पठाओ जस्ता यात्रु बोक्ने निजी सवारी चल्न दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन दिएका छन् । केही दिन अघि निजी सवारी बोक्ने ४ मोटरसाइकल पक्राउ परेपछि सामाजिक सन्जालमा यसको चर्को विरोध पनि भएको थियो । निजी मोटरसाइकल धनीले प्रविधिको प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोक्न रोक नलगाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री : जनताको जीवनसँग जोडिएका यस्ता विषयलाई हचुवाको भरमा रोक्ने निस्कर्ष गलत भएको र पुनः चल्नुपर्छ । पक्राउ परेको र थप अनुसन्धान गर्ने ट्राफिक महाशाखाको निर्णयपश्चात् अधिकाशं प्रयोगकर्ता साथै प्रतिपक्षी दलका…
केन्याको राजधानी नाइरोबी को डसिटडी2 होटलमा अज्ञात हतियारधारीको आक्रमण
केन्याको राजधानी नाइरोबी स्थित एक होटल कम्प्लेक्समा अज्ञात समूहद्धारा गोली चलाई आक्रमण हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । गोली चलेको र बम्ब पड्केको आवाज नाइरोबीको वेस्टल्याण्ड जिल्लामा पर्ने डसिट डी टु होटल र केही कार्यालय वरपर सुनिएको बताइएको छ । सोमालियन आतकंकारी अल सबाबका अनुसार यो घटना आक्रमणको क्रममा भएको बताएको छ । सरकारका अनुसार सम्पूर्ण भवनहरु मंगलबार बेलुकादेखि सुरक्षा घेरामा राखे पनि गोली चल्ने क्रम जारी नै रहेको जनाएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सो होटलमा रहेका ५ जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको र एक गम्भीर घाइतेको अस्पतालमा मृत्यु…
आज मिति २०७५ माघ २ गतेको राशिफल ! तपाईको दिनको सुरुवात !
मेष मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । विशिष्ट सफल यात्राको योगछ । प्रेम सम्बन्धपनि कसिलो हुनेछ । वृष अनावश्यक झमेलामा परिएला । चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला । संगीतमा रुचि बढ्नेछ । मिथुन जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । अवसर आइराख्नाले मन प्रसन्न हुनेछ । कर्कट आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ । आर्थिक कारोवारमा बिवादपनि आउला । सिंह रोपरिस्थितिवश काममा अलमल हुनेछ भने प्रतीक्षित नतिजासमेत कमजोर देखापर्नेछ। कामको चाप र जिम्मेवारी बढ्नेछ भने आत्मबलमा कमी आउन सक्छ। कन्या कामको चाप बढ्नेछ भने एक पटक…